FilmLight inogadzira Cold War inotarisira 'VaAmerica' - NAB Kuratidza Nhau ne Broadcast Beat. Mutasviki wezveNhepfenyuro weNAB Ratidza, Mugadziri weNAB Ratidza LIVE
musha » Featured » FilmLight inogadzira Cold War inotsvaka 'VaAmerica'
Nhepfenyuro yechitanhatu yakashongedzwa neHDR uye 4K Ultra HD pa Technicolor PostWorks
Yechitanhatu uye yekupedzisira Emmy muhope yekukunda mahedheni eAmerica, nguva yekupembera inofadza inonzi 1980s munguva yeCold War, yakanga ichangobva kupera muHDR uye 4K Ultra HD paTechnicolor PostWorks muNew York. Sezvo nyaya mbiri, kutarisa kwekatevedzana kwakagadzirwa kwave kuri mutoro waJohn Crowley, Senior Digital Colourist, achishanda paBlalight color grading system kubva kuLinternLight.
Sezvo kure kumashure kwezvitevedzo zviviri mu2014, apo Mutungamiri-Muiti Dan Sackheim akabatana neVaAmerica, chinangwa chaiva chekuita kutarisa mamwe mafirimu. Purogiramu yakagadzirisa zvakare yakatarisana nedambudziko rekurova kururamisa kwakanaka pakati pekutaridzirwa kweterevhizheni mu80s uye kutarisa kwemazuva ano, kunakidza kwevateereri vanotarisira nhasi izvo, nokuda kwezvikamu zvitanhatu, zvinosanganisira 4K Ultra HD uye HDR. Uye izvi zvose zvaifanira kuwanikwa pahuterevhizheni terevhizheni uye nguvacale.
David Woods naCrystal Whelan vakashanda sevarimi vhidhiyo, yakabudiswa naFox 21 Television Studios uye FX Productions yeFX Network.
"Nguva dzose yave iri dambudziko kuona chido chekunyorwa kwemashoko uye pasi pano vanhu ava vanogara pane imwe nhepfenyuro yemari," akati muveki Woods. "Uye zvinoratidzika kuti nguva yose yegore yatakanga tichiwedzera nhamba yekuona zvinoitwa shots. Uyewo chido chemufananidzo wacho, taive tichiita zvakanakisisa, zvakare, kuti 2018 New York ione se1987 Washington neMoscow. "
Pakuita zviratidzo zvakagadzirirwa makore 35 apfuura kuWashington neMoscow, asi kupfura panzvimbo dzeNew York City, chimwe chematambudziko chaiva chokuvanza zvinhu zvaizopa kugadzirisa. Izvo zvinova zvakakosha zvakanyanya muHDR uye 4K apo kuwedzera kwekugadzirisa uye tsanangudzo kunowedzera zvakaoma kuvanza mashoko, saka imwe yeCrowley's jobs yaive kushandisa zvigadzirwa zvepamusoro zvekushandisa muBlacklight kuti uise masikisi uye uvanze zvinhu nezvinhu zvisina kukwana.
Chinyorwa chimwe nechimwe chakanga chapera HD uye SDR, neCrowley kubhadhara pane rakarongedzwa. Aigara achibudisa sarudzo dzakasarudzwa mumutauro weViLiLLG BLG metadata, zvichiita kuti mupepeti uye mutariri ane ruzivo awane mavhesi ekupedzisira kuburikidza neBaselight ye Avid, the Base Baselight plugin Avid Media Composer.
"The Avid kuBaselight workflow yakapiwa yakaita kuti tikwanise kuunza ruvara rwekupedzisira uye maziso ekuona muimba yekugadzira kare kupfuura zvati tamboita kare, " Crowley akatsanangura. "Takakwanisa kuongororodza matanho makuru apo takanga tichitsvaga miganhu yakaonekwa, uye tinokwanisa kupa mufananidzo wekupedzisira wemuvara kune imwe nzvimbo yekubatanidza kubva pakamuri yekugadzira, izvo zvakatiponesa nguva yekusika yakakosha."
Kamwe chete kudarika kweSDR kwapera, Crowley akazogadzira HDR version.
"Paiva nechishuwo chakasimba chekuchengetedza chitarisiko chatakakotadza pamusoro pemakore mashanu ekupfuura HD uye UHD, SDR uye HDR, " akati mutori David Woods. "Ndakanga ndiine zvido zvinopinda mumwaka asi mumagumo, zvaive zvinoshamisa kuti nokukurumidza nekuita sekusingagumi John Crowley akaunza kutarisa kubva ku SDR muHDR. Baselight ndiyo ndiyo yakanakisisa yandaiona pakushandura pakati pezviviri. "
"Basa racho raive rakanyatsobudirira," akawedzera Crowley, "Uye akaita kuti basa rose rifambire mberi pasina chechi."
"Kuti uve chikamu chekuratidzira kwakadai seyiyo ropafadzo yakakura," akagumisa. "Kubata mifananidzo, iyo yakanyatsogadziriswa yakagadziriswa, iyo yakashata yakagadzikana uye mabhuku ekunakidza aida kuti ndakanga ndiri pamusoro pemutambo wangu pane zviitiko zvose. Ndinonzwa ndine ruzivo kuti ndakabatanidzwa mukubudirira kwechiratidziro. "
Mhedziso yekupedzisira yeAmerica yakakunda Emmy Award yevatungamiri vemutambo mumutambo wemutambo wakaenda kuna Matthew Rhys, pamwe neEmmy Mubayiro wekunyora kunoshamisa mumutambo wemitambo kusvika kumakwikwi akaumbwa naJoor Fields naJoe Weisberg.
FilmLight inoumba yakasiyana-siyana mavara ekugadzirisa maitiro, mapikicha ekugadzirisa maitiro uye zvishandiso zvekushanda kwebasa zviri kushandura mafirimu uye vhidhiyo mushure mekugadzirwa nekugadzirisa mitemo mitsva yehutano, kuvimbika nekushanda. Imwe nzira yakashambadzirwa ye metadata-based workflows inoshandisa michina yakasimba nechekucheka kwekugadzira zvombo zvekugadzira, zvichibvumira vashandi vekugadzira kushanda mberi kwe digital digital media revolution. Yakatangwa mu2002, Bhizinesi reLinternLight rinonyanya kuiswa mune zvitsva, kushandiswa nekusimbiswa kwezvigadzirwa zvayo-kusanganisira Baselight, Prelight uye Daylight-mumakambani ekufambisa ekutengesa, zvivako zvekugadzirwa kwemashure uye mafirimu / mafirimu eTV pasi rose. FilmLight inonyanya kuve muLondon, uko kutsvakurudza kwayo, kugadzira uye kushandiswa kwemabasa kunotangira. Kutengesa uye kutsigirwa kunoitwa kuburikidza nemasangano ekubatira uye nzvimbo dzakabatanidzwa munyika yose. Kuti uwane mamwe mashoko, shanya www.filmlight.ltd.uk
Mifananidzo yakapfupi naCaroline Shawley (ona zvose)
FilmLight inojekesa kuzvipira kuJapan yekusika mharaunda pa Inter BEE 2018 - November 8, 2018
FilmLight inogadzira Cold War inotsvaka 'VaAmerica' - October 29, 2018
4K Ultra HD Baselight Hondo Yemashoko Colorist Kuchengeta Kuchena colourist Crystal Whelan Dan Sackheim David Woods Emmy Award Filmlight Fox 21 Television Studios FX Network FX Productions HDR Joe Weisberg Joel Fields John Crowley Mateu Rhys MKM Marcomms MKM Marketing Communications Technicolor - PostWorks vokuAmerica	2018-10-29
Previous: Facebook Live Series Yakashambadzwa neRSA Broadcast uye ATEM 4 M / E Broadcast Studio 4K
Zvadaro: Systems Engineer
Hey Buddy !, Ndakawana ruzivo urwu kwauri: "FilmLight inoumba Hondo yeHuru inotarisa 'VaAmerica'. Heino chibvumirano chewebsite: https://www.broadcastbeat.com/filmlight-creates-cold-war-look-for-the-americans/. Ndatenda.